Imilinganiselo yoSapho yamaTshayina - Okunye
Imilinganiselo yoSapho yamaTshayina
Ngelixa i-China iye yamkela ngokufuthi iimpembelelo zaseNtshona, ulwakhiwo losapho lwendabuko lusexatyisiwe kwaye lubambe indawo ebonakalayo kwinkcubeko yamaTshayina. Zombini zemveli nezangokuIintsapho zamaTshayinabaneempawu ezifanayo nezokuziphatha ezifanayo komnye nomnye, kwaye ezi ziyinxalenye yobomi bemihla ngemihla kwiinkulungwane ezininzi.
Amaxabiso osapho lwesiTshayina aqhelekileyo abonisa ngokucacileyo, iindima ezahlukeneyo kunye namalungelo amadoda nabafazi. Ngelixa ezi zitshintsha ngokukhawuleza, i amaxabiso oqobo zisabonakala kumanqanaba athile.
Iintshukumo zangaphandle zoSapho Wonke umntu uya kuthanda
Iifoto zoLonwabo loSapho lwehlobo
Iimpawu zeTshayina zoSapho ezinemizobo eprintiweyo
Kwintsapho yesiTshayina yemveli, indoda inoxanduva lokugcina, ukubonelela nokukhusela usapho lwayo. Kwangelo xesha, unikwa lonke igunya lokwenza izigqibo xa kufikwa kumfazi wakhe, usapho kunye namanye amalungu osapho. Ikwanoxanduva lokugcina nokubhatalela abantwana bakhe, kubandakanya nemfundo yabo, de batshate. Kwiintsapho zale mihla, amalungu osapho adibana nabadala malunga nezigqibo ezibalulekileyo, kodwa utata akasenawo owokugqibela malunga nobomi babantwana abadala.
Abasetyhini ngokwesiko basebenze kwindawo ephantsi kwinkcubeko yamaTshayina. Oomama bendabuko baseTshayina babehlala ekhaya ukuze banyamekele ikhaya, abantwana, kunye nosapho luphela. Nangona kunjalo, indima edlalwa ngabafazi phakathi koluntu iya isanda. Ngokwe- Ingxelo yoPhuhliso lwaBantu yeNkqubo yeZizwe eziManyeneyo yoPhuhliso lweZizwe eziManyeneyo , I-China ifumene inqanaba lokulingana ngokwesini ngokufanayo ne-U.S. Ukongeza, indima yabasetyhini iyatshintsha kakhulu. Ngenxa yamathuba amaninzi, abasetyhini bafuna amakhondo emisebenzi endaweni yendima yokukhulisa abantwana. Nangona kunjalo, kubonakala ngathi kukho umda kwinto abanokuyenza abafazi okwangoku, ngokwe Umjongi oLungileyo . Bambalwa abantu ababhinqileyo kunamadoda ahlawulwa kakhulu, kwizikhundla zamandla aphezulu, njengeendima ze-CEO, kodwa oku kuyatshintsha ngokukhawuleza.
Ndingayondla njani inja yam endaweni yokutya kwenja
Iintsapho zemveli zamaTshayina ziyahlonipha Inkqubo yokuzalwa kukatata . Oku kuthetha ukuba umnombo kunye nomnombo womntwana ubalwa kutata wakhe kuphela. Amadoda kuphela kwabo banokufumana ubulungu bosapho kunye nomhlaba wosapho okanye elinye ilifa kolu hlobo lwenkqubo.
Kude kube nini ufuna ukuthatha umva imoto entsha
La mazwi 'usapho bubomi' ayabanjwaInkcubeko yamaTshayina. Intsapho ibaluleke kakhulu. Kubaluleke kakhulu, enyanisweni, ukuba usapho lusisiseko senkcubeko yamaTshayina. Iingcinga ezininzi zeConfucius zisekwe kusapho. Umzekelo, ezintathu ze ubudlelwane ezintlanu ezibalulekileyo Ngumyeni nenkosikazi, abadala kunye nabantakwenu abancinci kunye nabantakwabo. Ukuqonda ngokwenene ukubaluleka kosapho kuya kufuneka ujonge ubudlelwane obahlukeneyo. Kukho uxanduva kunye nemisebenzi echaziweyo kubazali, abantwana, kunye nootatomkhulu ku Umthetho wase China wase 1981 womtshato Okwangoku isebenza ngoku. Nangona kunjalo, kufanele kuqatshelwe ukuba indima edlalwa lusapho yinto eguqukayo, kunye nabanyeabantu abadala abancincibahlukana nenkcubeko yabo kwaye baqala izithethe zabo.
Umtshato, usapho kunye nabantwana zibaluleke kakhulu kwinkcubeko yamaTshayina. Ngenxa yokuba uninzi lwabantu luhlala kwiindawo ezisemaphandleni ixesha elide, ukutshata nokuba nabantwana kuthetha ukuba uya kuba nabasebenzi kwaye ukwazi ukwenza nokugcina umzi.
Imitshato yesiNtu yayihlelwa ngabazali bomtshakazi nomyeni. Izibini ezininzi azikaze zidibane de kube ngumtshato wazo. Imitshato ehleliweyo yayingavumelekanga kumthetho womtshato ka-1950. Izibini zaseTshayina zale mihla zikhetha amaqabane azo, kodwa uninzi lusacela imvume yabadala.
Njengakwiinkcubeko ezininzi zaseAsia, i abadala bentsapho bayahlonitshwa ngenxa yobulumko babo. Oku kusekwe kubuConfucius nangona ingcinga ye Inkxaso yenkxaso , ukuzinikela nentlonipho yabadala. Kuzo zombini iintsapho zesintu nezezi mini, abadala bayahlonitshwa, bayakhathalelwa kwaye bajongelwe luphela losapho. Kwiintsapho zesintu, kubandakanya nezo zihlala kwindawo yasemaphandleni, amakhaya amaninzi aquka izizukulwana ezihlanu ezihlala kunye. Nakumakhaya ale mihla, ootatomkhulu noomakhulu abaninzi bahlala nabantwana babo nabantwana babo. Ngokwesiqhelo badlala indima enkulu ekukhuliseni abazukulwana babo.
Ninikwenye indawo, ngokwesiko bahlonitshwa zii-altare zezinyanya emakhaya, zinamakhandlela, iifoto kunye nezinto abazithandayo abangasekhoyo. Nangona kunjalo, kuqatshelwe ukuba kwiindawo ezisezidolophini oku kuyaqala ukonakala. Kwinqaku lejenali Inani labantu baseTshayina eliguga ngokukhawuleza , kuyaboniswa ukuba umbono wokuhlonela ootata uqala ukonakala, uzise inkxalabo enokubakho yokungakhathalelwa kwabantu abadala.
infinity isikhafu isifundo sendlela yokunxiba
Ukulwa ukuxinana nokuxinana kwabantu, iRiphabhlikhi Yabantu yase China yayalela a umgaqo-nkqubo womntwana ngamnye kwikhaya ngalinye ngasekupheleni kweminyaka yoo-1970. Lo mthetho uhlala usebenza kuphela kwiintsapho zasezidolophini ngelixa ezinye iintsapho zasemaphandleni zinokuhamba ngokuba nomntwana ongaphezulu komnye. Lo mgaqo-nkqubo uphembelele indlela abajongwa ngayo abantwana kwaye bakhokelwa ekubulaweni kwabantwana kwabasetyhini kuba abantu ababhinqileyo ngekhe bakwazi ukuqhuba igama losapho okanye badle ilifa umhlaba wosapho. Umgaqo-nkqubo yapheliswa ngokusemthethweni ngo-2016 .
Ukuthobela kunye neCandelo loSapho
Kwiintsapho zesiko, bonke abantwana kulindeleke ukuba bathobele abazali babo ngaphandle kwengxoxo, kwaye abazali banokubabulala ngokusemthethweni abantwana babo ukuba abathobeli okanye bayala ukubonisa intobelo engathandabuzekiyo. Kwi-China yanamhlanje, amantombazana kunye namakhwenkwe ahlala ephathwa ngokulinganayo. Nangona kunjalo, uninzi lwabazali baseTshayina bangqongqo, kuba ukhetho lwabantwana lubonakalisa abazali. Oku kubuyela kwifayile ye- usapho lubonwa njengeyunithi kunokuba umntu ngamnye.
Inkcubeko yamaTshayina yenze iinguqu ezininzi kwiminyaka yakutshanje, kodwa ubume bosapho kunye nokubaluleka kwamaxabiso osapho kuhlala kugxilwe kubo.Iintsaphousaziswa, uhlonitshwa kwaye uyahlonitshwa, nokuba uhlala ngokwesiko, emaphandleni, okanye esixekweni, esixekweni.
Imifuno Igadi Isizwe Kunye Nenkcubeko Costumes Iikati General Info Abantwana Abasakhasayo Spices And Seasonings
indlela yokuthatha i-lash extensions ekhaya
Iingcango zekhabhinethi yekhitshi ezineepaneli zeglasi
Iikhathalogu ezizodwa zomtshato ngeposi simahla
itemplate yasimahla ye-candy bar engenanto
zeziphi iivenkile ezilungileyo ezilishumi elinambini
imisebenzi yokungena kwinqanaba lolawulo lweeshishini
ungasusa njani amabala okuhlamba iimpahla kwiimpahla